Chọpụta nkọwa niile nke Katidral nke León | Akụkọ Njem
Taa, anyị ga-ekwu maka otu n'ime katidral ndị kachasị mkpa na Spain, nke dịkwa na Camino de Santiago, ya mere ọtụtụ puku ndị njem ala nsọ na-eleta ya kwa afọ. Katidral a dị egwu bụ ọrụ Gothic ma ọ dị ezigbo mkpa n'echiche a, ebe ọ bụ otu n'ime nnukwu ọrụ echekwara na mba anyị n'ụdị a.
Nke a A makwaara Katidral dịka La Bella Leonesa ma na-aza aha ya. Ọ bụ otu n'ime okwu kachasị elu nke Gothic, nke mgbidi ya belatara ka o kwere mee, ma e jiri ya tụnyere ụdị ike siri ike nke kachasị na Romanesque, yana echiche nke ịdị elu maka ihe ịchọ mma ahụ.
1 Akụkọ banyere Katidral nke León
2 Mpụga nke katidral
3 Ime nke katidral
Akụkọ banyere Katidral nke León
E wuru katidral a na n’elu ebe e nwere ụfọdụ ịsa ahụ ndị Rom, nke nwere ebe buru ibu karịa katidral dị taa. Akụkọ ya dị ogologo, ebe ọ bụ na mgbe a na-emeghachị Ndị Kraịst ọzọ, e bibiri baths ndị a ma nọrọ n'ọnọdụ ha nwee obí eze, nke Ordoño II bi na ya. Site n'imeri ndị Arab, eze a kpebiri iwu kama ụlọ nke ụlọ nsọ iji fee Chineke ofufe maka inye ya mmeri ahụ. Enweghị ndekọ ụlọ nsọ a n'ụdị usoro ya, mana ọ ga-abụrịrị na ọ imomiri ndị ahụ emere na gburugburu narị afọ nke 1073. Mgbe nnupụisi na agha gasịrị, katidral a ghọrọ mkpọmkpọ ebe. Ọ bụ Fernando I de León ga-elekwasị anya na iwughachi katidral ahụ na enyemaka nke Doña Urraca. N'oge a, a ga-ewu katidral ahụ n'ụdị Romanesque nke meriri n'oge ahụ, edoro nsọ na XNUMX.
Ọ bụ na Narị afọ nke XNUMX mgbe iwu nke katidral Gothic malitere na anyị maara taa. Katidral a yiri ka ọ bụ ndị France atụpụtara ya ebe ọ bụ na, dị ka onye bu ya ụzọ, Katidral Burgos, ọ nwere atụmatụ ala nke Katidral Reims. Katidral a nwere ọtụtụ ndozigharị na ndokwa, ebe ọ bụ na usoro siri ike nke a chọrọ iji wepu ya na nnukwu mgbidi wee mepụta gburugburu ọkụ jupụtara na nsogbu nsogbu ụlọ mgbe ọ na-akwado usoro ahụ. Na nke a ka agbakwunyere ihe isi ike nke mbara ala, nke na-akwụsighị ike ma tachie ọtụtụ ọtụtụ ihe ndị gara aga.
Mpụga nke katidral
Otu n'ime akụkụ dị egwu na nke amata nke katidral a bụ n'ezie ihu ya. Mpụga na-egosi na ụdị Gothic na isi ya niile. Na ọdịda anyanwụ facade atụmatụ abụọ gothic elu nke nwere mita 65 na 68 dị elu, ya mere enwere ike ịhụ na ha anaghị eme nke ọma, ebe ọ bụ na e wuru ha n'oge dị iche iche. The Bell Tower bụ nke mbụ na-ewu Towerlọ Elu wuru ihe fọrọ nke nta ka otu narị afọ gasịrị. Ihe ndozi okpukpu atọ n'okpuru ụlọ elu si na narị afọ nke XNUMX. Ndị nọ n'akụkụ ahụ raara onwe ha nye Saint John Baptist na Saint Francis na onye nọ n'etiti ahụ raara nye Ikpe Ikpeazụ. N’ebe a, ị ga-ahụ ihe osise nke ndị eze na ndịozi, nnukwu ọrụ a wapụtara na nkume nke gafere oge. N'elu ọnụ ụlọ ahụ ka windo na-adọrọ adọrọ na-enwe iko nwere ntụpọ si narị afọ nke XNUMX.
Na Fsouth achada ị nwekwara ike ịhụ ụfọdụ ihe ndozi dị mkpa. A na-akpọ ọnụ ụzọ ámá nke Ọnwụ maka ịnwe ọkpụkpụ nwere nku nwere nku. N’ebe etiti ahụ, nke a na-akpọ Sarmental, bụ onyinyo nke Kraịst. N’akụkụ aka nri bụ Pórtico de San Froilán, nke nwere ihe oyiyi a raara nye onye nsọ a.
Ime nke katidral
A na-akpọkwa katidral ahụ thelọ nke Ìhè ma anyị ga-achọpụta ihe kpatara mgbe anyị banyere. Na Iko windo iri abụọ na ise juputara n’ìhè, ihe na-agaghị ekwe omume na katidral Romanesque ebe enwere mgbidi gbara ọkpụrụkpụ na-anaghị ekwe ka ìhè gabiga n’otu ụzọ ahụ dị ka ụdị Gothic dị ọcha. Site na windo rose gaa na iko ntụpọ na mgbidi, enwere ọtụtụ isi ọkụ nke na-eme ka ọ bụrụ katidral na-emeghe.
El ukwe nke ulo kacha ochie na Spen niile. Ọ bara ezigbo uru ma jiri osisi wapụta ya. Flemish nka nke XNUMX na narị afọ. Ebe ịchụàjà a chọtara n’elu ebe ịchụàjà ahụ malitekwara na narị afọ nke XNUMX, na-anọchite anya ndụ Saint Froilán. Katidral a nwekwara ọtụtụ ụlọ ụka.
Ọ bụ ezie na n'ụkpụrụ, e kere katidral na-enweghị cloisterN'ikpeazụ, e mere ya, mechaa ya na narị afọ nke iri na anọ. Gburugburu cloister enwere ụfọdụ ndị ịdabere, n'etiti ha Katidral Museum.
Ihe ọzọ enwere ike ileta na katidral a bụ crypt nke ejiri foduru ihe echekwara nke ebe ịsa ahụ Rom oge ochie. Achọpụtara ihe ndị a n'afọ 1996 n'ihi ya, ọ bụ ihe dị ọhụụ, ma ọ na-enye anyị ohere ịmatakwu gbasara akụkọ banyere katidral ahụ. Ọ dị n'ihu facade ndịda nke katidral ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » León » Katidral Leon